Fangaro amin'ny tsindrona
Vahaolana amin'ny vava
Fangaro maloto rano
Fitsaboana nentim-paharazana sinoa
Amoxicillion Sodium ho an'ny tsindrona
Sodium amoxicillion ho an'ny fametrahana tsindrona: Misy ny grama: ny sodium Amoxicillin 50mg. Fitaterana entana 1g. Description: Ny isan'ireo vokatra dia misy ny Campylobacter, Clostridium, E. coli, Erysipelothrix, Haemophilus, Pasteurella, Salmonella, penicillinase-negative Staphtlococcus ary Streptococcus spp. Ny hetsika bakteria noho ny fampiatoana ny rindrina synth synth ...
Miorina Procaine Benzylpenicillin ho an'ny Injecti
Procaine Benzylpenicillin nohamafisina ho an'ny famoahan-drindrana: Eeach vial dia misy: Procaine penicillin bp ……………………… 3,000.000 iu Benzylpenicillin sodium bp ……………… 1.000.000.000 Filazalazaina: Fangaro fotsy na fotsy fotsy fotsy. Hetsika pharmacological Penicillin dia antibiotika sela fantsom-bolo izay miasa voalohany amin'ireo bakteria miabo amin'ny grama ary cocci-grama vitsivitsy. ny tena sarotiny ...
Diminazene Aceturat sy Phenazone Granules amin'ny tsindrona
Diminazene Aceturate sy Phenazone Powder For Injection Composation: Diminazene aceturate ………………… 1.05g Phenazone …………………………. manohitra ny babesia, piroplasmosis ary trypanosomiasis. Fambara: Prophylactika sy fitsaboana ny babesia, piroplasmosis ary trypanosomiasis amin'ny rameva, omby, saka, alika, osy, soavaly, ondry ary kisoa. Contraindications: hypersensitivity amin'ny diminazene na phenazone. Administ ...
Ceftiofur Sodium amin'ny tsindrona
Ceftiofur Sodium ho an'ny fisehoan'ny tsindrona: fotsy amin'ny vovony mavo. Fambara: ity vokatra ity dia karazana iray antimicrobial agent ary ampiasaina indrindra amin'ny fitsaboana ny otrikaretina ao amin'ireo tranom-borona sy biby ateraky ny bakteria saro-pady. Ho an'ny akoho dia ampiasaina amin'ny fisorohana ny famoizana ny aretina voalohany vokatry ny escherichia coli. Ho an'ny kisoa dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny aretina taovam-pisefoana (pneumonia bakteria kisoa) vokatry ny actinobacillus pleuropneumoniae, pasteurella multocida, salmonella c ...
Mpiandraikitra ny varotra iraisam-pirenena: Ray Yang
Tamin'ny 20-22 jona Vondrona Jizhong dia nanatrika VIV ...
Amin'ny 20 Jolay 2016